कान दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? ५ मिनेटमै निको पार्ने यस्तो छ घरेलु उपाय !! – Hamro Lumbini
No Comments on कान दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? ५ मिनेटमै निको पार्ने यस्तो छ घरेलु उपाय !!
तर यदि तपाईको बाल बालिका को कानमा धेरै बढी वैक्स निस्कियो भने डाक्टरसँग सल्लाह अवशय लिनुस् । कहिले काही बाल बालिका हरुको कानलाई सफा गरेर पनि कुरा हुदैन । यस्तोमा डाक्टरी सल्लाह लिएर कुनै डप पनि हाल्न सकिन्छ ।